Yini kungaba New Year enkulisa
Ngo enkulisa izingane zizama ukulungisa cishe wonke amaholide. UNcibijane iyathinteka. Wayelindele nge look ekhethekile. Yini kungaba New Year enkulisa kanjani ukucabanga Matinee ukuze lutho ezingabanjwanga?
Okokuqala amaholide kudingeka beveza izinga ezinhle iskripthi. Kungcono uma uzobe yasungulwa bebodwa, kuphoqa abazali kanye nabanakekeli. Ngakho-ke sizokwazi ikhumbule zonke izifiso kanye nezincomo izingane. Ngakho kanjani kudlule iholide ngokwayo? Ngokuvamile kuba uhambo a inganekwane ezithile tale. Isidingo sokuthi kube ekuholeni, okuzokwenza zonke zingaholela, njengoba Santa Claus - ubuntu, lapho ayehla enze izimangaliso, nazo zonke izifiso zigcwaliseka. Endleleni, ungase futhi uthepha nezinye izinhlamvu - izilwane noma multgeroya ezingasiza Kiddies uhambe yonke indlela search for Umkhulu darnel ne isikhwama izipho umzukulu. Qiniseka ukuzitika zonke izingane kufanele eze phambili ukusho amazwi ambalwa noma inkondlo ukutshela. Esikhathini eside kusengaphambili nge izingane kudingeka ufunde eyodwa noma ngaphezulu nemidanso, funda ingoma - umuntu lokubonisa izihlobo Matinee ngubani siyohlala ehholo.
Unyaka omusha enkulisa kufanele ibe mnandi. Ngakho-ke, izingane kufanele bajabule ngokuba khona kulowo mkhosi. Ukuze wenze lokhu, ukulungiselela ezinye ezinhle puzzle Kiddies, qiniseka badinga bahlanganyele ekufuneni ahlukahlukene ukubuza iseluleko izingane. Ngakho izingane uyozizwa hhayi izivakashi futhi abahlanganyeli kusihlwa. Kuhle sokwenza uma guys umdanso ejabulisa hhayi ahlelwa. Ingabe kudingeke kanye nemincintiswano, izingane bathande ukuncintisana futhi wamukele kokuvusayo encane.
Uyini New Year enkulisa ephelele ngaphandle zokubhukuda samaholide? Lokhu abazali nezingane kudingeka ucabange kusengaphambili. Izingubo okungatholakala akhethwe isigaba noma ukhethe iholide ku izifiso wengane. Awu musa nje ukuthenga esinye isudi, futhi ucabanga ukuthi izingxenye kanye umntwana, into ku Siwohloza yabo. Ngakho-ke akuyona nje yokuqala, kodwa futhi esibalulekile ngokuya imisebenzi yezandla.
Ngakho, enkulisa, amaholide ... New Year. Yini kubalulekile ukukhumbula, ngoba mayelana nezipho for the kids. Uyini samanje engcono izingane? T. k. Akubona bonke omama yesimanje ukondla izingane zabo ushokoledi, izipho ngoba kwabo kuyoba nje ongenangqondo. Yethula kusukela umkhulu ukuba wusizo ekuthuthukiseni ingane, kanye efanelekayo zonke izingane, kungakhathaliseki ubulili kanye nezithakazelo. Kungenzeka ukulungiselela i-albhamu futhi amapensela zokuphetha ukunikeza umunwe upende noma izakhi ngonodoli, ukufaka umbala nofana i-encyclopedia ewusizo. Lezi zinto nakanjani singaba usizo kabi ngoba zonke izingane, futhi ngokuqinisekile ngeke ukulimaza impilo yakhe.
Yini abazali okufanele uyenze uma omunye ekuseni uyeza "uNcibijane"? Enkulisa akunakwenzeka ukuba ngokumelene nalo, uma izihlobo ukuthatha esebenzayo futhi uzimisele ukuba uzibandakanye umcimbi. A option omkhulu bekungaba kuhle kanjani uma omama nobaba bangavumelana lokubamba iqhaza ekhonsathini ukushintsha izinhlamvu ahlukahlukene kusuka inganekwane futhi enze izindima ezithile. Ngakho kuyoba mnandi ukuba izingane, ngoba abazali ukudlala nezingane njalo ukujabulela. Yebo, futhi ukuxhumana imvuthu yabo okungaphezu nje ngeke. Kulokhu, uNyaka Omusha enkulisa izobanjelwa ngaphandle kwezinkinga ezingadingekile nangobunzima.
Iyiphi into enhle ukukhwehlela ikhambi izingane?
Yini badla Vinni Puh emhlabeni elidume lwasemaphusheni?
Ithebula umhlobiso lokuzalwa: inhlebo kanye ezibalulekile umehluko wemisindo nemiqondo yamagama
Moonshine "Slavyanka": imfundo, ukubuyekezwa
Indlela ukukala blood pressure ekhaya?
Bonke abawinile "I-Battle of Psychics" yazo zonke izinkathi: amagama abo, ama-surname kanye ne-biography emfushane